Like – 11K Share – 953
သာ မနျ လူ says:
အရေးတျောပုံ မုခြ အောငျမညျ💪
Ko Man Kyaw Htun says:
2021-09-07 at 9:35 AM
အရေးတျောပုံရော ၊တညျဆောကျရေးတှရေော အရာရာအားလုံးအခြိနျတိုအတှငျးအောငျမွငျမညျ ။
တနေ့မှ မေ့မရတဲ့သူ says:
2021-09-07 at 9:37 AM
U Zaw Lin Oo says:
2021-09-07 at 9:40 AM
Wah Wah Win Htut says:
Maung Maung Win Htike says:
Ko Naing Soe says:
2021-09-07 at 9:54 AM
2021-09-07 at 10:04 AM
Thant Aung says:
2021-09-07 at 10:07 AM
Pòñț Pòñț says:
2021-09-07 at 10:11 AM
2021-09-07 at 10:18 AM
ကရငျနဲ့ ကခငျြက ယုံကွညျရတဲ့ သတငျးဌာနတှေ
တျောလှနျရေး စပွီလို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ သတငျးမှားတငျတဲ့ စာမကျြနှာတှမှော ခု ခကျြခငျြးကွီးပဲ တိုကျပှဲတှဖွေဈနသေလို စပွီး ရေးကွပါပွီ။ တိုကျပှဲသတငျးတှကေို ဒသေခံ၊ မွပွေငျမှာရှိနတေဲ့ သတငျးဌာနတှနေဲ့ တပျတှကေ ပိုတိကပြါတယျ။ သူတို့ထုတျပွနျခကျြတှကေိုလညျး စောငျ့သငျ့ပါတယျ။
https://www.facebook.com/Kokang311 (MNDAA, မုံးကိုး)
2021-09-07 at 10:20 AM
Daw Htay Khin says:
2021-09-07 at 10:28 AM
တန်ရာတန်ဖိုးပေးဖို့မလို တက်နိုင်သလောက် ကူညီလိုက်မယ်
2021-09-07 at 10:30 AM
Nang Shwr War says:
Moe M Zu says:
2021-09-07 at 10:44 AM
Covid19ကပျဆိုး ဘေးမှ အမွနျကငျးဝေးကွပါစေ
Hlaing Htwe says:
Htoo Htoo Cho says:
2021-09-07 at 10:47 AM
2021-09-07 at 11:14 AM
ကံ ကုန်း သား says:
2021-09-07 at 11:19 AM
တပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့ သာကူး ခါတော်မှီမျိုးချစ်တို့ မိသားစုတွေ ဦးစားပေသင့်တယ်လို့မြင်တယ် ပြီးတော့မှ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရေးက ပိုမိုတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ဆီသို့သွားမဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို တစ်ပါးတည်းခေါ်သင့်ပါတယ် နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ မအလတပ်မတော်ကြီးက မိသားစုဝင်တွေက တကယ်ချစ်တာဆိုတော့ ဝင်ရမဲ့အချိန်ခါကောင်းပဲ နောက်မကျသင့်တယ် မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့မအလကိုချစ်ရမယ်လေ ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဆို တဲ့စကားကိုသက်သေပြရန်အချိန်ရောက်ပြီး နောက်မကျပဲ အပြေးသာဝင်လိုက်တော့ ခြံစည်းရိုးတော့ ခွမထိုင်နဲ့နော် အခုကအကုန်လုံးသိနေပြီ ခွေးဖြစ်မှ ချီးစားရမှာပေါ့ မကြောက်နဲ့ 😁😁😁
2021-09-07 at 11:30 AM
#RejectMilitaryCoup. #WeSupportNUG. #RevolutionMustWin. #FederalDemocracyWillPrevail. #R2PforMyanmar. 🙏🙏🙏
Zarchichawchaw Zarchichawchaw says:
2021-09-07 at 11:32 AM
2021-09-07 at 12:37 PM
Daw Aye San says:
အရေးတော်ပုံ တော်လှန်ရေးမှာ ကျွန်တော် တို့တွေ Online social mediaပေါ်မှာ အားပေးနေရုံ သက်သက်နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အရင်လိုလူမှု့ နေထိုင်ရေး ဘဝတွေ ပြန်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Eaoတွေနဲ့ အတူလက်တွဲပါဝင်နေတဲ့ ညီအကို တွေကို တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လှူဒါန်းပေးပါလို့ လေးလေးနက်နက်ထပ်လောင်း တောင်းဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ။ အရေးကြီးပါပြီ သွေးစည်း ညီညွှတ်ကျကြောင်း ပြသပေးကျပါ။
Mahar Bamar says:
2021-09-07 at 10:20 PM